Jeneraly - Mag tsy mampino
Maninona no tokony hadio foana ny solomaso amin'ny tranobe?
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny trano ara-barotra dia manana singa fitaratra avy amin'ny rindrina ivelany sy anatiny mankany amin'ny fizarazaran'izy ireo sy ny haingon-trano. Saingy maro ny olona no tsy mahalala fa ny lazan'ny vera amin'ny tranobe dia tsy miankina amin'ny soatoavina maha-kanto azy fotsiny - mampindrana maoderina ny vera…
Haingon-trano momba ny tontolo iainana
Ao an-trano, ilay teny mihitsy dia mampitony. Ny trano dia toerana ahazoanao aina, azo antoka ary mafana. Samy manana ny fomba fijeriny ny trano ny tsirairay fa amin'ny faran'ny andro ny trano no tanjona farany hahatongavantsika tsirairay.…
Teknika miafina hanatsarana ny atitany miaraka ivelany
Ny fanovana ny faritra rehetra amin'ny tany sy ny fanaovana azy ho tsara tarehy kokoa dia antsoina hoe 'landscaping'. Anisan'izany ny fiovana eo amin'ny zavamaniry sy ny biby, izay antsoina koa hoe zaridaina, na haavon'ny toerana sy endrika terrain, rano ao. Ahitana firafitra, fefy, tranobe na koa izay misy…
Misafidy fefy vaovao ho an'ny zaridainanao
Matetika, ny fefy zaridainanao dia tokony havaozina, saingy tsy mora toy ny mivoaka sy mividy ireo enta-mavesatra isan-kerinandro. Na dia mety mieritreritra aza ianao fa fefy ihany, dia betsaka ny zavatra azo eritreretina ary misy ny zavatra mety…
Krizy amin'ny rano sy olan'ny tontolo iainana
Ny tontolo iainana eto amin'ny planetantsika dia mihamaloto isan'andro ary raha jerena ny fironana mitohy dia tsy azo hatsaraina izany amin'ny ho avy. Mihalalaka ny zava-maitso eto ambonin'ny tany sy ny rano, ny harena voajanahary sarobidy indrindra dia…
Ahoana no hitazomana ny maitso fanadiovanao
Amin'ny maha mpikarakara tokantrano sy reny ary biby fiompy ahy, ny adihevitra momba ny vokatra fanadiovana voajanahary dia mandaitra toy ny vokatra vita amin'ny simika dia zavatra nitolona tamiko nandritra ny taona maro. Tena ratsy tokoa ve ny fomba fanadiovana nentim-paharazana sy ny vokatra araka ny lazain'ny sasany?…
Fanontaniana sy valiny matetika momba ny fampindramambola ao an-trano
Ny fampindramam-bola ao an-trano dia nitondra soa ho an'ny olona rehetra izay nahita nofinofy hanana ny tranony nefa tsy afaka noho ny olana sasany na olana hafa. Voaporofo ho tombony ho an'ny mpiasa, ny…
Solar Solar any Alemana: Modely ho an'i Angletera?
Ny masoandro ara-barotra dia manondro ny fametrahana tontonana izay tsy onenana, ohatra amin'ny toeram-piompiana sy tafo birao sy trano fitahirizana. Mampiasa angovo betsaka kokoa ny orinasa raha oharina amin'ny an'ny tokantrano iray ary noho izany dia misy dikany ho azy ireo ny mametraka panneaux solaires izay afaka mampihena ny herinaratra…
Inona no hodinihina rehefa manary ny hazo krismasy anao
Aorian'ny Krismasy dia tonga ny fotoana izay anakanan'ny trano maro ny fako Krismasy ary manome toerana ho an'ny taona vaovao. Ny iray amin'ireo zavatra izay matetika ao anatin'ny lisitr'ireo olona maro dia ny fanariana ny hazo krismasy. Aorian'ny fomban-drazan'ny Krismasy milaza fa tokony…
Fahadisoana CRM mahazatra indrindra 4, ary ny fomba hialana amin'izy ireo
Mandany vola be ny orinasa hahazoana rindrambaiko CRM, miaraka amin'ny tanjona faratampony mba hahazoana lanja optimum amin'ireo rafitra ireo. Mampalahelo fa ny ankamaroan'izy ireo dia miafara amin'ny tsy fanarahana ny nofinofisin'izy ireo satria nanao fahadisoana izay tsy tokony hitranga ao amin'ny…
1 2 3 ... 28 Manaraka